काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (कात्तिक ९ गते) अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभाका लागि कामना सेवाले भोलि कात्तिक १० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज कात्तिक ९ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरु यो बैंकको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य ह�...
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो १५ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो असोज २५ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आगामी कात्तिक २३ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव कुल १९.४७ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा चुक्तापुँजीको २ अर्ब ६५ करोड १९ लाख ६३ हजार ७३१.५९...
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले अनलाइनमार्फत डिम्याट सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब बैंकमा बचत खाता भएका ग्राहकले घरमै बसी सहज रुपमा बैंकको अनलाइनमार्फत नै डिम्याट खाता तथा मेरो सेयर खोल्न सक्नेछन्। अनलाइनमार्फत खाताका लागि आवेदन दिएको केही समयमै डिम्याट खाता खोलिने व्यवस्था बैंकले गरेको छ। यसका साथै बैंकमा खाता नभएका...
काठमाण्डौ। कामना सेवा विकास बैंकले आजबाट ‘युनिफोक रिडिङ ग्लास’ सेवा सुरु गरेको छ। ग्राहकको सहजता र सुविधालाई मध्यनजर गरी नेपाल आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा बैंकले विश्व दृष्टि दिवसका अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संघले तय गरेको ‘आँखालाई माया गरौँ’ भन्ने नारालाई आत्मसात गरी विभिन्न बैंकिङ सेवाहरु लिने क्रममा सहज होस् भन्ने...
काठमाण्डौ। कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकको हितलाई मध्यनजर गर्दै छिटो कनेक्ट र मनम इन्फोटेकको सहकार्यमा केएस डिजी (डिजिटल वालेट) सेवा डेभलमेन्ट बैंकहरुमा नै पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस सेवाको प्रयोग गरी बैंकमा खाता नभएकाहरुले पनि घरमै बसी झन्झटरहित तवरले मात्र केही कागजात अपलोड गरी केएस डिजी वालेट खोल्न सक्नेछ...
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/८८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब तथा अन्य वितरणयोग्य कोषहरुसमेतबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्तापुँजी २ अर्ब ६५ करोड १९ लाख ६३ हजार ७३१.५९ रुपैयाँको कुल...
काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा नेपालस्थित तिनका परिवारजनका लागि कामना सेवा विकास बैंकले नयाँ एनआरएन बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले ७ प्रतिशतको उच्चतम ब्याजदरसहितको यस खातामा प्रथम वर्ष निःशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराउनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले रेमिट्यान्स तथा...
एनबीआईले कामना सेवाका कर्मचारीका लागि कार्यदक्षता विकास तालिम दिने
काठमाण्डौ । नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेड (एनबीआई) र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडबीच तालिम कार्यक्रमसञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेत र एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालबीच हस्ताक्षर गरेका छन्। यस �...
कामना सेवा विकास बैंक ग्राहकले सोल्टी होटेलमा विशेष छुट पाउने
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले पाँचतारे होटेल सोल्टीमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। बैंकका ग्राहकलाई छुट दिने विषयमा कामना सेवा विकास बैंक र सोल्टी इन्टरप्राइज प्रालिबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले सोल्टीमा सेवामा लिएबापत १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन्। बैंकका...
कामना सेवा विकास बैंकको पुननिर्मित डुम्रे शाखा कार्यालयको उद्घाटन
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडकोे तनहुँ जिल्ला बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं. १ डुम्रेस्थित पुननिर्मित शाखा कार्यालयको आज उद्घाटन गरिएको छ। ग्राहककोे सुविधालाई मध्यनजर गरी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न कार्यालयद्वारा अझै सहज र छरितो रुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हाल सञ्चालनमा रहेको कार्यालयको पुनर्निर्माण गरेको हो। शाखा...
कामना सेवा र ह्वाइट लोटस मोटर्सबीच सहकार्य, ग्राहकलाई सहज किस्ताबन्दीमै इलेक्ट्रिक स्कुटर
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक र ह्वाइट लोटस मोटर्सबीच ग्राहकलाई इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिदमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा समझदारी भएको छ। यो समझदारीसँगै ह्वाइट लोटसबाट इलेक्ट्रिक स्कुटरका खरिदमा ग्राहकले कामना सेवाबाट सहज रुपमा कर्जा पाउने भएका छन्। योग्य ग्राहकलाई मासिक किस्ताबन्दीमा इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिदका लागि ह्वाइट लोटस...
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। आज सार्वजनिक आर्थिक २०७७/७८ को चौथो त्रैमाससम्मको वितरणले बैंकले समीक्षा वर्षको यो अवधिसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो। समीक्षा अवधिसम्म बैंकले गत ७० करोड २ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा...
कामना सेवा विकास बैंकको ऋणपत्र बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल नियुक्त
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ। यस सम्बन्धमा कामना सेवा विकास बैंक र एनआईबिएल एस क्यापिटलबीच आज एक सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत र एनआईबिएल एस...
कामना सेवा विकास बैंकको दुम्कीबास शाखा स्थानान्तरण
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडकोे नवलपरासी जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १ दुम्कीबासस्थित शाखा कार्यालय स्थानान्तरण भएको छ। ग्राहककोे सुविधालाई मध्यनजर गरी अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न शाखा कार्यालयद्वारा अझै सहज र छरितो रुपमा सेवा प्रदान गर्ने हेतुले हाल सञ्चालित भवनदेखि करिब ५० मिटर उत्तरतर्फ न्यू विशाल...